The Story of the White Envelope
Gathering On Christmas Day
Khir Toyo Dakwa Dia Jadi Kambinghitam Untuk UMNO Rampas Selangor
Paris' Pampered Pooches
Using personal Bank acc to receive public donation
Killing Field of ABSDF Part2(in Burmese) by Aung Moe Win
Killing Field of ABSDF Part 1 (in Burmese) by Aung Moe Win
Posted: 25 Dec 2011 09:45 AM PST
Whether it's Karpal against Ramasamy or Hasan Ali vs Mustafa Ali, to me all this is getting too melodramatic. They get so much attention for nothing.
I don't know why the Press and blogs gave them too much space. You think they simply want to put their respective parties -DAP and PAS - at rickety and let others, especially those in Barisan Nasional to gain some advantages?
These people are mature politicians, matured enough to weigh the adverse impact of their action on their party. Why must their strip naked and let others bugger them?
After all, general election is just around the corner. While PM Najib is waiting for some 'signs' as to when is the right time to dissolve the Parliament, there is no logic for the Opposition to open up their party to the onslaught of others.
If there isareal rift among them, the Opposition is only courting trouble as any unresolved internal issue will be very costly for their dream of wresting Putrajaya from Barisan Nasional. While the party members are hoping for the best in the next outing, they can't afford to take such internal crisis to their campaign.
So, it isamelodrama by the Opposition, and some BN leaders are already buying the tickets to watch it. They are already making so many statements and comments about the 'bickering' among the Opposition leaders. To be precise, they are falling into this simple political trap.
Those at rift are political hooligans. They want cheap publicity for their political platform. As their popularity goes down among their own supporters, they needavehicle to recharge.
And the best choice is to moot an idea among themselves, write the script, direct it and tailor themselves to what was planned. Not so difficult as they are already good natural actors. All they needed was justaperfect rehearsal.
Now, when the drama gets popular, it leaves BN politicians and analysts to no choice but to watch and pass remarks about it, just like many who spoke about anti-Namewee but also went to the cinema to watch his 'Nasi Lemak 2.0'.
That is how some BN politicans, inlcuding ministers made stupid gain by coming out with various comments about the crisis in DAP and PAS. However, instead of getting lauded for inviting Rama and Hasan Ali to join Umno should they choose to leave their respective parties, they are getting chided and criticised.
All this leads toacommon public perception - that BN is so hard up to have this few people from the Opposition to join them, forgetting the fact that more BN senior politicians had left the ruling party to join Pakatan Rakyat or going against the BN.
Please leave Karpal, Ramasamy, Hasan and Mustafa alone. Let them batter each other because it has nothing to do with BN, especially Umno. We would be happy if they finally shake hands and reconcile. If this happens, who will 'malu'?
There is no need for us to invite them into Barisan Nasional. The ruling party is well-recognised and needs no ads and marketing. We should stay focus and attend to our own problems before we can build confidence for the next national poll.
Do not be sucked into the Opposition's affairs. Let them be. If the crisis is for real, BN will indirectly gain some boost out of it. However, when we start to 'interfere' in their internal-but-publicised affairs, we already turned ourselves as political cheapskates.
Posted: 25 Dec 2011 08:59 AM PST
Posted: 25 Dec 2011 08:43 AM PST
It all began because my husband Mike hated Christmas—oh, not the true meaning of Christmas, but the commercial aspects of it- overspending… the frantic running around at the last minute to getatie for Uncle Harry and the dusting powder for Grandma—the gifts given in desperation because you couldn't think of anything else. Knowing he felt this way, I decided one year to bypass the usual shirts, sweaters, ties and so forth. I reached for something special just for Mike. The inspiration came in an unusual way.
Well, we ended up walloping them. We took every weight class. And as each of their boys got up from the mat, he swaggered around in his tatters with false bravado,akind of street pride that couldn't knowledge defeat.
That's when the idea for his present came. That afternoon, I went toalocal sporting goods store and bought an assortment of wrestling headgear and shoes and sent them anonymously to the inner-city church. On Christmas Eve, I placed the envelope on the tree, the note inside telling Mike what I had done and that this was his gift from me. His smile was the brightest thing about Christmas that year and in succeeding years. For each Christmas, I followed the tradition—one year sendingagroup of mentally handicapped youngsters toahockey game, another yearacheck toapair of elderly brothers whose home had burned to the ground the week before Christmas, and on and on.
You see, we lost Mike last year due to dreaded cancer. When Christmas rolled around, I was still so wrapped in grief that I barely got the tree up. But Christmas Eve found me placing an envelope on the tree, and in the morning, it was joined by three more. Each of our children, unbeknownst to the others, had placed an envelope on the tree for their dad. The tradition has grown and someday will expand even further with our grandchildren standing around the tree with wide- eyed anticipation watching as their fathers take down the envelope. Mike's spirit, like the Christmas spirit, will always be with us.
Posted: 25 Dec 2011 08:37 AM PST
Posted: 25 Dec 2011 08:22 AM PST
Posted: 25 Dec 2011 09:20 AM PST
Posted: 25 Dec 2011 07:41 AM PST
"Seluruh ahli Pas wajib bertambah yakin bersama perjuangan di atas bahtera parti dengan setiap pengalamannya walaupun tidak diberi hak yang adil, inilah sifatnya perjuangan Islam.
"Pas telah berjaya menghadapi semua pengalaman di sepanjang perjuangannya sejak ditubuhkan, sama ada secara bersendirian, bersefahaman dengan kerajaan, pembangkang dan NGO, Islam atau kalangan bukan Islam," katanya dalam satu kenyataan semalam.
"Kejayaan dicapai apabila kalangan bukan Islam menerima konsep perlembagaan, Islam menjadi agama negara dengan hak yang diberi secara adil kepada penganut agama lain, hak Bumiputra, Bahasa Kebangsaan dan Raja Berpelembagaan," katanya.
"Apakah tempoh masa lebih lima puluh tahun masih tidak mampu melakukan muhasabah?" katanya. -SH
Posted: 25 Dec 2011 05:55 AM PST
It wasanice gathering!
The former Selangor mentri besar has maintained his innocence, insisting that the RM3.5 million deal was at market value and ona"willing buyer, willing seller" basis.
"Right from the start," he said when asked by reporters after the guilty verdict if he was being madeapolitical scapegoat.
After judge Datuk Mohtarudin Baki ordered the seizure of the property and sentenced the Sungai Panjang assemblyman to 12 months jail, Dr Khir told reporters that "this is not the final judgment and I will continue to fight to clear my name."
"On the question of politics, I will answer after January 9," he added in an apparent reference to the date of Opposition Leader Datuk Seri Anwar Ibrahim's sodomy verdict.
Athimulan also told reporters that the defence was "baffled" by the heavy punishment.
"Market value is not important anymore and it will just be based on the seller's price," he said, before his smiling client left the court complex here.
Posted: 25 Dec 2011 03:00 AM PST
"Inaway we are actually lucky. The NFC issue couldn't have come atabetter time. Before this we were always trying to give examples of what we claim to be corruption by Umno-Barisan Nasional.
"But with this issue, we haveagolden opportunity to reach out toahost of voters... for us, Shahrizat's case is the best example of what is wrong with Umno and its leaders... corruption, cronyism, money politics," Rafizi (picture) Ramli told The Malaysian Insider.
The PKR strategic director said that recent "test runs" by party leaders during ceramahs showed an increasing demand for the NFC scandal to be highlighted, especially among rural voters.
"In Kemaman, for instance where there'saceramah, sometimes I don't bring up the NFC issue but then they get upset. The kampung folk, rural folk want to talk to about it. They are upset about it," he said.
"It's something they can relate to...you talk about submarine scandals it'sabit confusing, but with the NFC it's about lembu (cows)- how much do you need to menternak lembu (take care of cows) and how do you make money out of it.
"Whenever we mention the figures, people are outraged," added Rafizi.
He said PKR has also taken steps to ensure the entire chronology of the scandal could be "appreciated" and understood by all via pamphlets and posters.
PKR first latched onto the issue after the RM250 million federally-funded cattle project made it into the pages of the Auditor-General's report for 2010, which described the NFC as "a mess".
Since then, the party has made several revelations related to the scandal, including the NFC's purchase of twin multi-million luxury condominium units in Bangsar, the alleged use of project funds to finance Shahrizat and her family's personal expenses and trips abroad.
The latest disclosure by PKR, made on Tuesday, alleged that some RM10 million was diverted towards the purchase of luxury condominium unit in Singapore for Shahrizat's family.
Shahrizat has sought to deflect away attention by stating she was "only the wife" of the national cattle farming project's chairman and had nothing to do with the NFC.
Posted: 24 Dec 2011 11:40 PM PST
BBC ONLINE: 25 December 2011 Last updated at 00:00 GMT
The pampered pooches of Paris By Joanna Robertson Paris
Pet dogs in the French capital appear to enjoy the freedom of the city, accompanying their owners just about everywhere - and even have their own cemetery.
There are hundreds of thousands of dogs in Paris.
Deputy Finance Minister Datuk Dr Awang Adek Hussin has admitted that he receivedacash contribution through his personal bank account, as alleged byablogger.
However, he denied the cash contribution wasabribe, saying it was donated from various quarters for social programmes in Bachok, Kelantan, where he is the Umno division chief.
Posted: 24 Dec 2011 11:16 PM PST
A special card for all of you....
Posted: 24 Dec 2011 11:04 PM PST
this one is from none other than our holy father, the pope, pope benedict XI. taken from the malaysian insider. i find it good so i CnP it here. like to highlight this:
yes, it'sashame that christmas had been so commercialised. christmas isareligious festival… it's not like chinese new year, tamil new year, hari raya. i wonder who started the count-down to christmas. i thought count-down is for the new year of 1 jan only… oh and merdeka too. there's no count-down during chinese new year and hari raya, right? if anything, they want to count-down, at the stroke of midnight on 24 dec, they should shout "happy birthday jesus" instead of "merry christmas". ahh but then they know not it is jesus' birthday, they only know it is time to be jolly and merry amidst the christmas tree, santa claus, jingle bells. (or they know but choose not to acknowledge). this morning when i attended mass at church, during the priest's homily, he lamented "where is jesus in the christmas celebration? he is missing."
POPE USHERS IN CHRISTMAS, DECRIES COMMERCILISATION
VATICAN CITY, Dec 25 — Pope Benedict ushered in Christmas for the world's 1.3 billion Roman Catholics yesterday, urging humanity to see through the superficial glitter and commercialism of the season and rediscover the real significance of the humble birth of Jesus.
"… let us strip away our fixation on what is material, on what can be measured and grasped. Let us allow ourselves to be made simple by the God who reveals himself to the simple of heart," he said.
"God has appeared – asachild. It is in this guise that he pits himself against all violence and bringsamessage that is peace," he said.
"At this hour, when the world is continually threatened by violence in so many places and in so many different ways, when over and over again there are oppressors' rods and bloodstained cloaks, we cry out to the Lord…" he said.
"…we suffer from the continuing presence of violence in the world, and so we also ask you: manifest your power, O God. In this time of ours, in this world of ours, cause the oppressors' rods, the cloaks rolled in blood and the footgear of battle to be burned, so that your peace may triumph in this world of ours."
"And let us also pray especially at this hour for all who have to celebrate Christmas in poverty, in suffering, as migrants, thataray of God's kindness may shine upon them, that they – and we – may be touched by the kindness that God chose to bring into the world through the birth of his Son inastable," he said.
Today, the pope will deliver his twice-yearly "Urbi et Orbi" (to the city and the world) message and blessing from the central loge of St Peter's Basilica.
He continues his Christmas and New Year's celebrations on December 31 withayear-end Mass of thanksgiving known by its Latin name Te Deum.
He is due to visit Mexico and Cuba in March. — Reuters
for the christmas message from our (peanng) chief minister, lim guan eng, please click here.
Posted: 24 Dec 2011 11:57 PM PST
"Kita akan siasat perkara ini di bawah Seksyen 161, Enakmen Pentadbiran Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang 1982," katanya kepada Sinar Harian, semalam.
Posted: 24 Dec 2011 10:44 PM PST
From the F.B. of Zaw Moe Aung
၁၉၉၂ ခုနှစ်…မြောက်ပိုင်း အေဘီအက်စ်ဒီဖက် တွင်..မိမိနေရာ၊အာဏာလိုချင်သည့်အတွက်….
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုထွန်းအောင်ကျော် အပါဝင် ၁၅ ဦးအား ခေါင်းဖြတ်သတ်သူ၊ ကျောင်းသားပေါင်း ၆၀ ခန့် အား နည်းပေါင်းစုံနဲ့ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု့တွင် အဓိက ကြိုးကိုင် ခေါင်းဆောင်ခဲ့သူ….အောင်နိုင်ခေါ် ရော်နယ်အောင်နိုင် ( ယခု – ထိုင်းနိုင်ငံ )
internews သတင်းဌာနတွင် အလုပ်လုပ်နေ။
@ facebook —-http://www.facebook.com/RonaldAungNaing
ယခု အင်တာနယူး သတင်းဌာနတွင် အလုပ်လုပ်၊ လစာကောင်းကောင်းရနေ၊ သူ့ကိုစာရေးတင်ပြီး ၀ိုင်းဖြုတ်ကြပါ။
Posted: 24 Dec 2011 10:18 PM PST
ကိုထိန်လင်းရဲ့ "ကျွန်တော်သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ခဲ့စဉ်က"ကို ဖတ်ရတော့ ယူကြုံးမရ ဖြစ်ရတဲ့အပြင်တော်တော် လဲသံ ဝေဂရခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာရှင်စံနစ်ကိုတွန်းလှန်ဖို့ကြိုးစားရင်း၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အစည်း တွေ ပြည်သူ့အရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးတွေပျောက်ကွယ်၊ ပန်းတိုင်ကိုမေ့ပြီး ၊ ရန်သူကပင်မလုပ်တဲ့ ရက် စက်မှုအပေါင်းသရဖူဆောင်း တဲ့အထိလူကိုလူလို့မမြင် တော့ဘဲ၊ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ပွဲ ဝင်နေပါ တယ်ဆိုသူတွေက လူ့အခွင်အရေးတွေကိုမျက်ကွယ်ပြု၊ လူတွေကို အဟိတ်တိရစ္ဆာန်တွေလိုအရိုင်း အစိုင်းခေတ် ကအတိုင်းလူမဆန်တဲ့နှိပ်စက်နည်းတွေနဲ့မတွေးဝံ့လောက်အောင် ရက်ရက်စက်စက်နှိပ်စက်ပြီး၊ အပစ်ရှိ ပါတယ်လို့ ဝန် ခံခိုင်း၊ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ လူရိုင်းတိုင်းပြည်လိုပြုကျင့်ခဲ့တာတွေကြောင့်၊ ဗမာနိုင်ငံကို တကယ် ကယ်တင်ချင် တယ်၊ တကယ် လူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားတယ်၊ ပြည်သူတွေအတွက်ရယူပေးချင်ပါ တယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအား လုံးကြပ်ကြပ်အသဲထဲမှာစွဲနေအောင်မှတ်သားထားပြီး၊ ငါတို့ဒီလိုအလုပ်မျိုးတွေကိုဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူးလို့၊ မိမိကိုယ်ကိုမိမိ လေးလေးနက်နက် ဂတိပြုပြီး စက်ဆုပ်ရွံရှာ စွာ စံနမူနာယူသင့်တယ် လို့တိုက် တွန်းချင်ပါတယ်။
Posted: 24 Dec 2011 09:57 PM PST
မြောက်ပိုင်းဒေသ မှ အရိုးတွန်သံများ (အပိုင်း-၂-)(အောင်မိုးဝင်း)
From the FB of Maung Maung Wann
ခုခံချေပချင်သူတွေဘက်မှ ကျောင်းသားတယောက်ကနေ ဖေ့ဘွတ်မှာ မှတ်ချက်တခု ပေးထားတာကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ " တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း ဒီကိစ္စ ကို ပြန်လည် တုန့်ပြန်ဖို့ လုပ်နေတယ်" ဆိုတဲ့ စကားပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းသိင်္ခ ရဲ့ မမင်းဖြူမှန်မှန်ပြော ဝတ္ထုထဲက စကားလို၊ " အိုင်ပီ အောင်သင်းရေ- ဒီ ကွင်းဆက် က စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးပဲဗျ၊ ဇာတ်လမ်းကတော့ အထွဋ်အထိပ် ကို ရောက်လာပြီဗျို့" လို့ ပြောရမလို ဖြစ်လာပါပြီ။ ကျနော်တို့ လိုချင်တာလည်း " အဲ့ဒီ တာဝန်ရှိသူတွေဆိုတာ ဘယ်သူလဲ" ဆိုတဲ့မေးခွန်းပါပဲ။ သွေးအေးအေးနဲ့ လူသတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကို ဘဝမှာ တခါတလေလောက်တော့ ပြန်ပြီး အမဲလိုက်ကြည့်ချင်စိတ်က ပေါ်နေတာ အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဇာတ်လမ်းတခု ပြောပြမယ်ဗျာ။
မသတ်ရသေးပဲ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတဲ့ ကျောင်းသား (၅၀) ကျော် အကျဉ်းထောင်က ဖောက်ထွက် လွတ်မြောက်သွားပြီ ဆိုတာ ကို သိလိုက်တဲ့ "မျိုးဝင်း" ဟာ အရုပ်ကြိုးပြတ်လဲကျသွားပြီး " ဟာကွာ ငါ့ဘဝတော့ သွားပါပြီ" လို့ ငြီးငြူတယ်ဆိုပဲ။ သူမတရားသဖြင့် နှိပ်စက်နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ကမ္ဘာမြေဟာ စတင်မီးလောင်ပြီးပြိုကျနေပြီ။ သိတ်မကြာဘူး။ အကုသိုလ်ကံက သူ့နောက်ကို လိုက်ပါလာတယ်။ နောက်ကျည်ထိ သေဆုံးသွားတယ်။ (တချို့ကတော့ နှုတ်ပိတ်ခံရတယ် လို့ ဆိုတယ်) တကယ်တော့ သူ့ကို မသေစေချင်ပါဘူး။ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ အဲ့သလို မြန်မြန်အသက်ထွက်သွားတာ မတန်လိုက်တာဗျာ။ တကယ်ဆို သံချောင်းလိုပဲ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ကြိုးမိန့် (၅) ခါလောက်ကျရမှာ။ အင်း- ရော်နယ် အောင်နိုင် ကတော့ ဒီကိစ္စတွေကို ဘယ်သူ တာဝန်ခံဖြေရှင်းမှာလဲ။ အဖွဲ့ကို ဖျက်ပစ်မှဖြစ်မယ် လို့ အကြံပေးသတဲ့။ ကျောင်းသားတပ်မတော်(မြောက်ပိုင်း) ရဲ့ သမိုင်းကို ခြေရာဖျောက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့သူတွေက သွေးရောတကယ်ရှိလို့လား။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာ။ " ဟော့ဒီ အစုလိုက်အပြုံလိုက် လူသတ်မှုကို ဘယ်သူက တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမလဲ" ဆိုတဲ့အချက် ကိုပေါ့။
နေပါအုံး။ တာဝန်ရှိသူတွေထဲမှာ " လှဆိုင် ( ကချင်သံဝဲဝဲနဲ့ပြောရရင် လှဆောင် ပေါ့ဗျာ) ဆိုတဲ့သူရောပါမလား။ သူက တရုပ်နယ်စပ်မှာ ဇာတ်မြှုပ်နေနေသူ လို့ သိရတယ်။ အာသံကုန်းမှာ မျိုးဝင်းနဲ့အတူ ကျောင်းသားတွေကို ဓါးနဲ့အပိုင်းပိုင်းခုတ်သတ်ခဲ့သူ လို့ နာမည်ကြီးတာပဲ။ တွေ့ချင်ပါသေးတယ်ဗျာ။ ဒီလောက် ဘီလူးသရဲစီးနေတဲ့ နှလုံးသား ဘယ်လို ဆဲလ်နဲ့များဖွဲ့စည်းထားသလဲ လို့ပါ။
"ဒါတွေဟာ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေမှ ဟုတ်ရဲ့လား။ ကျောင်းသားချင်း ဒီလိုလုပ်တာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား" လို့ သံသယနဲ့ကောက်ချက်ချသူ တယောက်ရဲ့ စကားလုံးတွေကို ကျနော်သဘောကျမိပါတယ်။ ဒီလိုဆို ကျနော်တို့ဘက်က ပြန်လည်မေးမဲ့ မေးခွန်းတခု ကို ဖြေဖို့ အသင့်ပြင်ထားပေးပါ။ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာ တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်၊ ကျောင်းသားတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ခဲ့တဲ့ သူတွေဟာ ကျောင်းသားဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ လူသတ်မှုကို ယဉ်ပါးကျွမ်းဝင်နေတဲ့ ( စံနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားထားတဲ့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား)။ မန္တလေးသားတွေက မေးခွန်း( ၃) ခု နဲ့ စောင့်နေပါ့မယ်။
ဒီကိစ္စကို ကျနော်က ဦးဆောင်ပြောပြနေတာ ကျနော့မှာ အကြောင်းရှိပါတယ်။ မျိုးဝင်း ( မိုးညှင်း) ဆိုတာ ကျနော်တို့ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတဦးဖြစ်သလို၊ သမိုင်းဆောင် အတူတကွ နေထိုင်ပျော်ပါးခဲ့ကြဘူးသူတွေပါ။ သမိုင်းဆောင်မှာကတည်းက သွေးဆာပြီး လက်ယဉ်လေ့ရှိတဲ့ မျိုးဝင်း တယောက် အရေးတော်ပုံအပြီး၊ မြောက်ပိုင်းဒေသမှာ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလုပ်နေတယ် ဆိုတော့ ဘုရားတလိုက်မိတယ်။ နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်မရှိတဲ့ လူမိုက်တွေ လက်နက်ကိုင်တဲ့အခါ၊ တော်လှန်ရေးသမားဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ အကြမ်းဖက်သမား၊ ဓါးပြဂိုဏ်းလောက်သာဖြစ်လာမှာ အသေအချာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း သူရှိနေတဲ့ မြောက်ပိုင်းကို သွားမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတခါမှ မတွေးခဲ့ပါဘူး။ ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ ရော်နယ်အောင်နိုင်၊ ကိုစိုးလင်း ( အေဘီ ဗဟိုမှာ ဖမ်းဆီးခံရသူ) သုံးယာက်က မန္တလေးသားတွေပါ။ ခုတော့- ရော်နယ်အောင်နိုင် တယောက်သာ မဲဆောက်မှာ ကြီးပွားချမ်းသာပြီး၊ ပါတီပွဲတွေမှာ သောက်စားမူးယစ် အဆီယစ် ရီဝေနေတဲ့ မျက်နှာကြီးကို ကြိမ်ဖန်များစွာတွေ့ရ၊ ဖေ့ဘွတ်မှာ မိန်းကလေးတွေကို အီစကလီ စာလေးတွေ လိုက်ရေးနေတာကိုတွေ့ရပေမဲ့၊ ကိုထွန်းအောင်ကျော် ( ဗကသ-အထက်ဗမာပြည် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျောင်းသားတပ်မတော်၊ မြောက်ပိုင်း-ဥက္ကဋ္ဌ) က အသတ်ခံရ၊ ကိုစိုးလင်းက မန္တလေးကို ပြန်လည်ထွက်ပြေးလာရပါတယ်။
ထောက်လှမ်ရေးလို့ စွပ်စွဲခံရတဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ ပြည်တွင်းကို ပြန်ဝင်လာတော့လည်း စစ်အစိုးရက ဖမ်းပြီး ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်တွေချခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ပါဂျောင်ဒေသမှာတုံးက ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ စစ်ကြောရေးစခန်းမှာ ဝင်ရောက်နှိပ်စက် ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့၊ လက်နက်မှုနဲ့ကျတယ်ဆိုတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော် ရဲဘော်တချို့ကတော့ ထောင်ဒဏ် (၂) နှစ်လောက်နေရပြီး၊ တက္ကသိုလ်တွေမှာ ကျောင်းပြန်လာတက်ကြပြန်တယ်။ သူတို့ကလည်း မိုးညှင်းဘက်က ကျနော့သူငယ်ချင်းတွေပါ။ စက်မှုမေဂျာ က တယောက်ဆို၊ "နန်းစော" ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကို ကောင်းကောင်းနှိပ်စက်၊ ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ထဲမှာ ပါခဲ့သေးတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်က စပြီး မြောက်ပိုင်းဒေသရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကို စတင်ခြေရာခံလိုက်ခဲ့မိတော့တယ်။ စစ်ကြောရေးစခန်းက ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူတွေရော၊ စစ်ကြောရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့သူတွေရော၊ နှစ်ဘက်လုံးက ကျနော်နဲ့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေတယ်။ နှစ်ဘက်လုံးက ရင်ဖွင့်သံတွေကို ရင်နာနာ နားထောင်ခဲ့ရတော့တယ်။ "ဘုရားရေ- ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ" လို့ တနေခဲ့ရတယ်။ တကယ်တော့ ခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံရသည့် (၁၅) ယောက်အပြင်၊ စစ်ကြောရေးစခန်းမှာ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက် လို့ သေဆုံးသွားခဲ့သူ (၁၄) ယောက်ရှိပါတယ်- နောက်ပိုင်းမှာ နာမည်တွေကို အသေးစိတ်ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
" ဒီအိမ်ပေါ်မှာ ကောင်းချီးမင်္ဂလာရောက်စေသော်" တဲ့
Posted: 24 Dec 2011 09:42 PM PST
မြောက်ပိုင်းဒေသ မှ အရိုးတွန်သံများ ( အပိုင်း – ၁ ) (အောင်မိုးဝင်း)
ကျောင်းသားတပ်မတော်(မြောက်ပိုင်း)ရဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခွပ်ဒေါင်းအလံကို မြတ်မြတ်နိုးနိုးလွှင့်ထူခဲ့တဲ့ ရဲဘော်တွေအားလုံးကို မင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ လို့ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။ နှစ်သစ်မှာ အနာဂတ်အတွက် တက်ကြွလန်းဆန်းတဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ ရှေ့ခရီးဆက်ကြမယ်။
မကောင်းဆိုးဝါးတွေ ပူးကပ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင် ကို ရှင်းထုတ်ကြမယ်။ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် ( အထက်ဗမာပြည်) ရဲဘော်တယောက်အနေနဲ့၊ ၁၉၉၀ မန္တလေးညီလာခံကို လာရောက်တက်ခဲ့ကြတဲ့ မိုးညှင်းဒေသက ကျောင်းသားတပ်မတော် ရဲဘော်တွေကို အထူးတလည် နှုတ်ခွန်းဆက်သ ချင်သလို၊ ကျောင်းသားတပ်မတော် ( မြောက်ပိုင်း) ရဲ့ တော်လှန်ရေးသမိုင်းဂုဏ်သိက္ခာကို သွေးစီးချောင်းတွေပေါ်မှာ မျှောချ၊ အဖွဲ့ဖျက်ပစ်သည်အထိ သေးသိမ်အောင်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့၊ သူ့လူကိုယ့်ဘက်သား လူသတ်သမားများကိုတော့ သမိုင်းစာရင်းရှင်းတမ်းအဖြစ် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားကြပါမယ်။ ကျောင်းသားတပ်မတော်နဲ့ တော်လှန်ရေးကို အသက်စွန့်ပြီး ချစ်ခဲ့ကြပေမဲ့၊ ကျဆုံးစာရင်းမှာ အသိအမှတ်ပြုမခံရတဲ့ ရဲဘော်တွေအတွက် ဆက်လက်မေးခွန်းထုတ် ကြရပါလိမ့်မယ်။ စိန်ခေါ်တောင်းဆိုကြရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပါ။ သူတပါးကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်ကံတွေကို ကျနော်တို့ဆီ လောင်မြိုက်ကူးစက်မှုတွေ မရှိစေချင်ပါဘူး။ ပြဿနာတွေကို စိတ်အေးအေးထားပြီး ဖြေရှင်းကြရပါလိမ့်မယ်။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစုံတယောက်အပေါ်မှာ မုန်းတီးခြင်းမျိုး၊ တဖွဲ့နဲ့တဖွဲအုပ်စုဖွဲ့ သိက္ခာချတိုက်ခြင်းမျိုးကို ရှောင်ရှားပြီး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံရုန်းကန်မှုရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို သင်ခန်းစာယူကြသင့်ပါတယ်။ မှတ်တမ်းအဖြစ်လောက်သာ ထားရှိခြင်းမပြုလုပ်ပဲ၊ ဆက်လက် အရေးယူဆောင်ရွက်ရပါမယ်။
ဒီနေရာမှာ KIA နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောစရာတခုရှိပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေ အယောက်(၉၀) ကျော်ဖမ်းထားတာကို ကြားတော့ KIA ဗိုလ်မှူးတွေက လာရောက်မေးပါတယ်။ ( ထုံးစံအားဖြင့်တော့ KIA က ကျောင်းသားတပ်မတော်အပေါ်မှာ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်လေ့မရှိပါဘူး)၊ " ငါတို့မှာ ဘရန်ဆိုင်းလက်ထက်ကတည်းက ရန်သူ့ထောက်လှမ်းရေးဆိုလို့ (၅) ယောက်လောက်သာ မိဘူးပါတယ်။ မင်းတို့ဟာက များလှချည်းလား။ ဟုတ်လို့လား" ဆိုတော့ " ရော်နယ်အောင်နိုင် က အော် - ဗိုလ်မှူးတို့ကလည်း ကျားကိုက်ပါတယ် ဆိုမှ အပေါက်နဲ့လား လို့ မေးနေရသေးတယ်။ ဗိုလ်မှူးတို့က ငါးယောက်ပဲ မိတယ်ဆိုတော့ ညံ့တာပေါ့" လို့ ရယ်မောပြီးဖြေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ရော်နယ်အောင်နိုင် ရဲ့ " All the Wars are Dirty" အင်တာဗျူးမှာ ကေအိုင်အေ အပေါ်အပြစ်တွန်းချထားတဲ့ စကားတွေကို ပြုံးမိပါတယ်။ လူသတ်တာတွေကြားတော့ ဖုံးမရဖိမရ အနံ့တွေထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ ကေအိုင်အေ က စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ ဇွတ်အတင်းဝင်ရောက်လာပြီး ရပ်ခိုင်းတော့တယ်။ နန်းအောင်ထွေးကြည် ကို ခေါ်ထုတ်သွားတယ်။
တဦးက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင် ရဲမေ မခင်ချိုဦး အကြောင်းပါ။ သူမ နဲ့ စွပ်စွဲခံရတဲ့ ပြည်စိုးနိုင် (ရန်ကုန်) ကို လိုင်စင်လို အေးခဲတဲ့ရာသီအောက်မှာ မြေမြှုပ်ပြီး၊ ခေါင်းကိုသာမြေပေါ်ဖေါ်ထားခဲ့တယ်။ နှိပ်စက်မှုဒဏ်ကြောင့် သေဆုံးသွားတဲ့အခါ၊ မခင်ချိုဦး ကို အေးခဲနေတဲ့ ရုပ်အလောင်းအား Oral Sex လုပ်ခိုင်းတယ်။ မျိုးဝင်းတို့ အုပ်စုတစုလုံးက မုဒိမ်းကျင့်ပြီး ခေါင်းဖြတ်သတ်ဖို့ လုပ်တဲ့အခါ၊ " နောင်ဘဝမှာ ခုလို ခေါင်းပြတ်ကြီးနဲ့ မသေပါရစေနဲ့၊ သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ပေးပါ" လို့ တောင်းဆိုတဲ့အတွက် သံချောင်းက သေနတ်နဲ့ဝင်ပစ်ပေးခဲ့တယ်။ ဒုတိယတဦးကတော့ ကိုကျော်ဝေ ပါ။ သူ့ကို ပျော့မိုင်းနဲ့ချည်ပြီး ဘောလုံးကွင်းထဲပတ်ပြေးခိုင်းတယ်။ ပျော့မိုင်းကွဲသွားခဲ့တဲ့အတွက် လက် ပြတ်သွားတယ်။ အဲ့ဒီ လက်ပြတ်ကြီးနဲ့ပဲ အချုပ်ထဲမှာ ဆက်လက်ချုပ်နှောင်ထားခဲ့တယ်။ သူ့လိုပဲစစ်ကြေရေးကာလမှာ မိုင်းခွဲခံရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။
အပတ်စဉ် (၅) သင်တန်းကာလ၊ တပ်တွင်းဆွေးနွေးပွဲတွင်၊ ကိုမျိုးဝင်းအား ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်ခဲ့သဖြင့်၊ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခါနီးတွင်၊ ကိုမျိုးဝင်းမှ၊ " ဟေ့ကောင် မင်း ငါ့ကို အပတ်စဉ် (၅) တုံးက ပြောသလို ပြောနိုင်သေးလားဟု အငြိုးကြီးစွာ မေးခဲ့သည်ကို ကျနော်ကိုယ်တိုင်နားဖြင့်ကြားရပြီး၊ ဋ္ဌေးမြင့်ဝင်းမှ သေနတ်နှင့် ပစ်သတ်ပေးရန်တောင်းဆိုသဖြင့်၊ သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခံရပါသည်။